जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई पछुतो हुनेछ ! – AB Sansar
September 28, 2020 adminLeaveaComment on जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई पछुतो हुनेछ !
अवस्य पढ्नुहोला ,म सुतेको थिए , मेरी श्रीमतिले मेरो टाउको मालिस गरीरहेकी थिइन ,म बिस्तारै – बिस्तारै निदाए जागेपछी उनले निधारमा भिक्स लगाइदिइन मेरो आँखा खुल्नासाथ उनले सोधिन केही आराम मिल्यो कि नाइ मैले मिल्यो भनेर टाउको हल्लाए फेरि उनले सोधिन कि , खाना खानुहुन्छ मलाई भोक लागेको थियो मैले भने खान्छु ” *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
उनले फटाफट रोटी , सब्जी , दाल ,अचार , सलाद तुरुन्तै मेरो सामनेमा
पस्किइन र आधा पल्टी – पल्टी मेरो मुखमा गाँस हाल्दै खुवाइन , मैले चुपचाप खाना खाएर फेरि ढल्किए श्रीमतिले मलाई आफ्नै हातले खाना खुवाएर उनी खुशी महसुस गर्दै किचनको काममा गइन म चुपचाप सुतीरहे र सोच्न थाले कि पुरुष पनि कस्तो हुन्छ केहिदिन अघि मेरी श्रीमती बिरामी पर्दा मैले केही पनि गरिन यहाँसम्म कि एक कल फोन गरेर पनि खबर सोधिन उनले पुरैदिन केही खाएकी थिइन ,तर मैले उनलाई ब्रेड पस्किएर आफैलाई गौरवान्वित महशुस गरीरहेको थिए।
यो पनि पढ्नुहोस , एजेन्सी । भाविन तुरकिया र उनका भाइले शून्यबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले अर्बौँ डलरमा परिणत भइसकेको छ । यसमा भाविनले आफ्नो सफलताको पूर्ण श्रेय पिताको एउटा सुझावलाई दिएका छन् र दाजुभाइ दुवैले बाल्यकालदेखि नै त्यही सन्देश शरण गर्दै आएको समेत उनले बताए । फोब्र्सका अनुसार भाइ दिभ्यांक सहित उनको कूल सम्पति १.३ अर्ब डलर बराबरको रहेको छ । उनले १९९८ मा १८ वर्षको उमेरमा २५ हजारको लगानीमा आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए।
पिताले दिएको एउटै सुझावले आफूलाई सर्वाधिक सफल व्यक्ति बनाएको उनी बताउँछन् । उनले स्कुल पढ्दादेखि सफ्टवेयर कम्पनी स्थापना गरि सञ्चालन गर्दै आएका हुन् । ‘वेब होस्ट र डोमेन नेम’ रेजिस्टर गर्ने कामबाट उनीहरुले लाखौँ डलर कमाइसकेका छन् । उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा आफू अत्यन्तै साधारण परिवारबाट रहेको र पिताले दैनिक बिहान नौदेखि रातिको नौ बजेसम्म काम गरि घरव्यवहार चलाउने गरेको बताए । र आज उनी जुन स्थानमा पुगेका छन् त्यसका लागि पितालाई नै धन्यवाद दिएका हुन् ।
उनी भन्छन्, “बुवाले दिनुभएको त्यो सुझाव म सानो हुँदादेखि नै हरेक क्षण दिमागमा आइरहन्थ्यो । कतिपय कुराहरु धेरै समयसम्म दिमागमा खेलिरहेपछि मात्र मनमा बस्छ भने जस्तैगरी त्यो कुराले पनि मेरो मनमा छोयो । उनको सन्देश अत्यन्तै साधारण र केबल एक वाक्यको थियो तर त्यसले नै मेरो जिन्दगी बदलिदिएको छ । उहाँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो, ‘तिमीले एउटा कुरामा आफ्नो पूरा ध्यान लगायौ भने जतिसुकै ठूलो चिज भएपनि हासिल गर्न सक्नेछौ ।’ यही कुरालाई मैले आन्तरिक रुपमा मनन गरिरहेँ । यसले वास्तवमै तपाईँको आत्मविस्वास बढाउन सक्छ । यसपछि नै मलाई ‘फिजिक्सको फन्डामेन्टल ल’ अर्थात प्रकृतिको मूलभूत कानुन नतोडिने विश्वको जेसुकै उपलब्धी हासिल गर्न सम्भव भन्ने लाग्यो । ”
May 30, 2021 Ab-संसार
खुशीको खबर : अब मासिक २३३ रूपैयाँमा २५ एमबीपीएसको इन्टरनेट
June 4, 2021 santosh